Maro no manombana fa fakana bahana amin’ny raharaha mafampana amin’io taona vaovao higadona io no ao ambadik’io. Mandeha ny resaka fa hisy ny fanovana ny mpikamban’ny governemanta vao miandoha ny taona, ka miozongozona amin’izany ny toeran’ireo minisitra tsy HVM. Mifamatotra amin’ny paikady hoenti-miatrika ny fifidianana 2018 no tanjona, raha ny fahitana azy, ka governemanta hanao propagandin’ny antokon’ny mpitondra am-perinasa no hisy fa tsy governemanta hiasa sy hamaha ny olan’ny Malagasy. Misy amin’ireo mpikambana ankehitriny no tsy tena namana ny sasany, tsy salama lava nefa ny raharaham-pirenena tsy miandry, ka handraisana fepetra. Tsikaritra ihany koa ny ady an-trano eo amin’ny samy mpikambana ao anatin’ny antokon’ny fitondrana. Efa mivoaka ihany koa ny resaka amin’ny mety handakana ny praiminisitra am-perinasa Mahafaly Solonandrasana Olivier, izay anisan’ny niady mafy tamin’ny fampandresena ny HVM tamin’ireo fifidianana nifandimby teto amin’ny firenena hatramin’ny 2015, izy rahateo minisitry ny Atitany. Ho avy indray izany ny fitsipahan-doha ny laka-nitana ?